‘कुनै दिन क्लिक भइएला भन्ने आशा छ’ - Himal News Express
‘कुनै दिन क्लिक भइएला भन्ने आशा छ’
हिमाल समाचार ९ माघ २०७८, आईतवार १३:३६ 674 पटक हेरिएको
काठमाण्डौँ । ‘हिम्पी’संगीत पारखिको लागि नयाँ शब्द हो । थुलुङ ,राई समुदायको भाषामा ‘कान्छी’लाई ‘हिम्पी’ भन्ने गरिन्छ । सोही शब्दलाई गायक कुमार प्रयासले गीतमा प्रयोग गरेका छन् ।
रंकाशु स्टुडियोमा रेकर्ड गीतमा एरेन्ज, मिक्सिङ र मास्टरिङ देवेश राईले गरेका छन् । सुरज तामाङको निर्देशनमा तयार नग्मा श्रेष्ठ, सञ्जिव नाछिरिङ र कुमार प्रयासले अभिनय गरेका छन् । सरल कथामा प्रस्तुत गरिएको गीतको भिडियोमा गीतको भाव अनुसार वियोगलाई प्रस्तुत गरिएको छ । विशाल थापाले छायांकन गरेको भिडियो सम्पादन सनम मगरले गरेका हुन् ।
सोलुखुम्बुको लोखिममा जन्मेका गायक प्रयासले यसअघि पनि आधा दर्जन बढि गीतमा आफ्नो स्वर रेकर्ड गराएका छन् । उनका ‘ऋणै ऋणको भारी बोक्दै’, ‘मिठुको भट्टी पसल’, ‘जुनको आँशु’, ‘प्रवेश निषेध’लगायतका गीत दर्शक स्रोताले मन पराएका छन् । उनको कम्पोजिसनमा ‘परेलीको बाटो हुँदै’बोलको गीत गायिका श्रेया राईले गाएकी छिन् । उनै गायक तथा संगीतकार कुमार प्रयाससँग सहकर्मी शिखर गजरकोटेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
गीतमा ‘हिम्पी’शब्द छनौट किन गर्नुभयो ?
एउटा गीत बनाउ भन्ने मनमा थियो । गृह जिल्ला सोलुखुम्बु पुग्दा वियोगान्त कथामा गीत बनाउने काम शुरु भयो । छोडेर जाने मायालुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा ‘हिम्पी’शब्द आएको हो । सानु, निरमाया, कान्छी लगायतका शब्द गीत संगीतमा धेरै प्रयोगमा छन् । नयाँ शब्द प्रयोग गर्ने सोच अनुसार आफ्नै समुदाय (थुलुङ राई समुदाय)को बोलिचालिको भाषा ‘हिम्पी’लाई प्रयोग गरे । यसको अर्थ ‘कान्छी’लाग्छ । मैले मेरो साथीको लागि गीत बनाएको थिएँ । तर पछि आएर आफ्नै गीत, संगीत र स्वरमा रेकर्ड गराए ।
माया मैले गरेकै हो हिम्पी
किन मन दुखायौँ नी लौ ।
संयौँ जंघार तरेकै हो हिम्पी
किन बाटो मोड्यौ नी हौ ।।
भिडियो सामान्य बनेको रैछ, खर्च कति भो ?
हो, सामान्य भिडियो बनाउँ भन्ने थियो । काम पनि सोही अनुसार नै गरेको हो । तर हामीजस्तो अभाव र दबाबमा संगीत क्षेत्रमा रमाउनेहरुका लागि अरुका लागि सामान्य भनिएको खर्च पनि धेरै लाग्छ ।
सुरुवाती प्रतिक्रिया कस्तो छ ?
कमेन्ट एकदम ऊर्जावान छ । भेट्नेहरु शुरुमै ‘हिम्पी’शब्दको अर्थ सोधिहाल्छन् । मिडिया सर्पोट पनि राम्रो पाएको छु । भ्यूज कति जाला भन्दा पनि सुनेकाहरुले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउछन् भन्ने मुख्य लाग्छ । नेपाली संगीतमा राम्रा सृजनाहरु दिउँ भन्ने मनसाय अनुसार नै अघि बढिरहेको छु ।
संगीतको शुरुवाती सर्घषपुर्ण अनुभव कस्तो छ ?
म हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुको पनि गाउँमा जन्मे हुर्केको व्यक्ति हुँ । मेरो गाउँ लोखिम हो । त्यही नै मेरो शिक्षादिक्षा भयो । मेरो अनुभव सुखदुखको छ । विद्यालय तहमा गीत गाइन तर जब उच्च शिक्षा शुरु भयो । जब, गाउन थाले । शुरुमा माओवादी निकट जनसाँस्कृतिक महासंघ सोलुखुम्बुले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गाए । सल्लेरीमा आयोजित कार्यक्रममा पहिलो पटक स्टेज चढेँ । त्यस प्रतियोगीतामा संगीतकार लक्ष्मण शेष, विशेष खालिङ र सन्तोष सुब्बा जर्जको रुपमा थिए । राजेशपायल राईको ‘तिमिलाई रोजे, विश्वास गरे’बोलको गीत गाएको थिए । म त्यहाँ भलिबल खेल्न गएको थिए । त्यसअघि खास तयारी नभएकोले पनि पहिलो चरणबाटै प्रतिस्प्रर्धाबाट बाहिरिएको याद छ ।
दोस्रो प्रतियोगीता मैले महाकुलुङ (सोलुखुम्बुको दुधकोशी पारिको क्षेत्र)पुगेर सामना गरे । भलिबलसंँगै भएको ट्रयाक गायन प्रतियोगीतामा ५० भन्दा बढि प्रतिस्प्रर्धी साथीहरुमा सान्त्वना स्थान हासिल गरेको थिए । पुरस्कार एक हजार नगद पाएको थिए । त्यसबेला पनि म भलिबल टिममा समाबेश भएर गएको थिए । साथीभाइले गायनमा पनि भाग लिन आग्रह गरेपछि सहभागी बनेको थिए । त्यसपछि जिल्ला भित्र गाउँघरमा हुने प्राय कार्यक्रममा पुगेकै हुन्थे । एकदम कम हुन्थ्यो, पोजिसन हात नपारेको । साथीभाइको हौसला र प्रतियोगीतामा पाएको ऊर्जाले सेल्फ मोटिभेट भए । जस्को कारण आज म यहाँ छु ।
तपाई भलिबल पनि खेल्नुहुन्थ्यो ?
हो, खेल्थे । शुरुशुरुमा भलिबल प्रतियोगीतामा भाग लिन कार्यक्रम चाहर्थे । निकै राम्रो खेलाडी त होईन । तरपनि एक्स्ट्रा खेलाडीको रुपमा टिममा हुन्थे । जहाँ भलिबल प्रतियोगीता हुन्थ्यो । त्यहाँ साँझमा मनोरञ्जनका लागि गायन वा नृत्य प्रतियोगीता आयोजना हुन्थे । आफू सँग गाउने सामान्य रहर र साथीभाइको आग्रह अनुसार गायन प्रतियोगीतामा सहभागी बन्दाबन्दै मेरो भविष्य नै गायन बनिसक्यो । अहिले विविध अभाव र दबाबका बीचपनि सृजनालाई स्रोता दर्शक माझ प्रस्तुत गर्न छाडेको छैन् ।
तपाईको अर्को गीत छ नी, डान्सिङ बिटको ‘मिठुको भट्टी पसल’। यो गीत राम्रो हुदाहुदै पनि दर्शकको भ्यूज पाएन नी ?
यो गीतमा मैले मेरी आमाको नाम र आमाको कामलाई रोमान्टिक तवरले प्रस्तुत गरेको छु । मेरी आमाको नाम ‘मिठु’हो । उहाँले कुनै समय ‘भट्टी पसल’चलाउनुहुन्थ्यो । आमाको नाम, भट्टी पसल र त्यहाँ विक्रि हुने तरल पदार्थलाई समाबेश गरेर ‘मिठुको भट्टी पसल’गीत बनाए । यो गीत आमालाई पनि सुनाउन देखाउन पाए । निकै खुसी हुनुहुन्थ्यो । छिमेकीले आमालाई छोराले तेरो नाममा गीत बनाएछ भनेर सुनाउदा आमा अझ मक्ख पर्नुहुन्थ्यो । तर गएको बर्ष आमालाई यो घर्तिबाट गुमाए । उनै आमाप्रति समर्पित अर्को गीत रेकर्ड गरिसकेको छु । जुन गीतमा सुवाससंगम राईको शब्द र विक्रम राईको संगीतमा मेरो स्वरमा ‘अस्ताएकी आमा’सार्वजनिक गर्दैछु ।
बाटो दियौँ, माटो दियौँ, यति सुन्दर संसार दियौँ ।
तर आमा अस्ताएर निभेको साँझ दिलाइ गयौँ ।।
गीत संगीतको दुख के हो ?
मुख्य कुरा त आर्थिक नै हो । लगानी गर्ने वातावरण बनेन वा लगानी आफूसँग छैन् भने सृजनालाई दर्शक स्रोता सामू सार्वजनिक गर्न सकिदैन् । राम्रो टिमवर्कमा पनि समस्या छ । लगानी छ तर शब्द, संगीत र टिम अभावमा सृजना मर्दो रहेछ । ती सबै कुरा मिलेर सृजना बाहिर ल्याएपछि रिटर्नको वातावरण छैन् । लगानी बालुमा हालेको मानी जस्तै छ । गीत संगीतमा लागेकाको जिन्दगाी रमाइलो होला भन्ने लाग्छ तर एउटा सघर्षपुर्ण गायक, सर्जकको अभाव र दबाब कस्ले बुझिदिने । निकै समस्याका बाबजुत पनि गीत संगीतको यात्रा छाडेको छैन् । भोलि उज्वल बनाउन आज सघर्षरत छु ।
तपाईको सांगीतिक यात्रा सफलता नजिक देख्नुहुन्छ ?
गीत संगीतको नशाले गर्दा पनि निरन्तर लगानी भइनै रहेको छ । हरेक सृजनामा कुनै न कुनै कोणबाट आशा राखिन्छ । राम्रो सृजना बजारमा पठाउँ भन्ने हो । राम्रो सृजना गाउदागाउदै कुनै दिन क्लिक भइएला भन्ने आशा छ । त्यतिबेला अहिलेसम्मको सम्पुर्ण लगानी उठ्ला भन्ने आशा जिवितै छ । त्यसकारण निरन्तर संगीतमा छु ।
धर्मराजले पोखरेलले ल्याए कांग्रेसको
अमेरिकामा छायांकन गरिएको भगवानको
कुमार प्रयासले ल्याए ‘मारेको
गायक लामाले टेके लोबुचेको
नेचाली गजलकार शर्माको ‘बिरानो
६० समूहलाई पछि पार्दै
दयाकृष्ण राईको कविता कृति
आभा मुकारुङको नयाँ गीत
‘डाँडाघरे साँइली’पछि ‘टेकमाया’